यसरी बन्छ समृद्ध सिद्धिचरण - Sagarmatha Online News Portal
शिवप्रसाद ढुंगाना २० असार २०७६, शुक्रबार
“पढिसक्दा जिम्मेवार अधिकारीहरुले डाटा अफ गर्ने धैर्यता गुमाएनन् भने चाँही केही संभावनाका पाटाहरु पनि यहाँ उल्लेख भएका छन्, जसले तिनका घैंटामा उज्यालो छिराउन मद्दत गर्छ ।”
यो स्तम्भ लेखेपछि दुई वटा प्रश्न आउन सक्छन् । पहिलो, मेरो सिंहदरवारको सिंहावलोकन किन सिद्धिचरणबाटै ? र दोस्रो, यसका नकारात्मक पाटो मात्रै छन् ? यसको सैद्धान्तिक जवाफ यो हो कि सिद्धिचरणलाई एउटा मानवसँग दाँज्दा सारपक्ष मान्छेको मुटु र रुप पक्षचाँही अनुहार हो । यसर्थ यो स्वच्छ मुटु भएको सुन्दर मान्छेजस्तो हुनुपर्छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिकालाई सार र रुप दुवै पक्षबाट अध्ययन गर्ने जो कोहीले सिंगो ओखलढुंगालाई नै साँगोपांगो रुपबाट चित्रण गर्छन् । यो सबैको प्रथामिकता र चासोमा छ । त्यसमा म पनि पर्छु । दोस्रो, यहाँका समस्याबाट उठान गर्दा समाधान गर्ने अधिकारीहरुलाई दवाव पर्छ, र सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । यो आलेखको उद्देश्य नै त्यही हो । यसले कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा पार्ने असरप्रति सरोकार राख्दैन, किनकी यो सामुहिक सरोकारको सवाल हो ।
अब ओखलढुंगाको मुटु भनिएको सिद्धिचरण नगर साँच्चै कस्तो छ त ? यसबाट चर्चा गरौं । नगरपालिका प्रवेश गर्नासाथ जंगलका बीचमा राजमार्गमै सवारी रोकिन्छन्, र हामी नगरबासीहरुले उत्सर्जन गरेको फाहोरको डंगुर हेर्दै मुख बिगारेर मलमुत्र त्याग गर्छौं । बजारक्षेत्रमा पानी पर्दा हिलो र नपरेको दिन धुलोले हैरानी व्यहोर्नुपर्छ । सदरमुकामका ढल, बाटो, वधस्थल लथालिंग छन् । असारे विकास बर्षेनी हुन्छ, अर्को असारसम्म टिक्दैन । खानेपानीका पाइपमा हिलो र चेपागाँडा बगेर आइपुग्छन् ।
घुमिफिरी रुम्जाटार भन्ने उखानले नै चर्चामा रहेको सिद्धिचरणको मुटु पूर्वतर्फ रुम्जाटार छ । त्यहाँका आधा घर खाली छन् । सुन्तलाका पुराना बोट धमाधम मरे । नयाँ रोपिएका छैनन् । भेडा मासिएर राढीपाखीले परम्परा धान्न धौ धौ छ । नेपालको प्रजातन्त्रभन्दा पुरानो धावन मार्गमा जहाज नआएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्यो । कालोपत्रे भएको विमानस्थल सेल्फी स्पट र बेला बेला सम्भ्रान्तहरुले देखाउन ल्याउने जहाज अवतरणस्थल मात्रै बनेको छ, आकस्मिक अवतरण बाहेक ।
बर्णालु र जन्तरखानीका आलुले बजार राम्रो पाउँदैनन् । किसानले उत्पादन गरेर तरकारी बजार ल्याउन सकस छ । तर, बर्षेनी करोडौंका भारतीय तरकारी हाम्रा भान्छामा पाक्छन् । सडकमा जोडिएका सडक बत्ति दुई महिनापनि टिक्दैनन् । ढलका स्ल्याब ‘तीन महिने’ मात्रै हुन्छन् ।
बर्षा लागेपछि सडक बन्द हुन्छन्, र पनि असारैसम्म धमाधम सडक नै निर्माण भइरहेका छन् । विगुटारमा तरकारी कुहिन्छ, तलुवा र ठूलाछापमा खानेपानी छैन । सिद्धिचरण कृषि उत्पादनका अथाह संभावना बोकेर पनि दिगो योजना नपाएको, देख्दा हरियाली देखिने भित्र सुख्खाग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । नगरभित्रका गाउँमा पानीका मुहान सुक्दैछन्, टुकीले पालो पाएको छैन, रत, यसले आफ्नो पहिचान बनाएको छ !
यतिसम्म पढिसक्दा जिम्मेवार अधिकारीहरुले डाटा अफ गर्ने धैर्यता गुमाएनन् भने चाँही केही संभावनाका पाटाहरु पनि यहाँ उल्लेख भएका छन्, जसले तिनका घैंटामा उज्यालो छिराउन मद्दत गर्छ ।
यसरी बनाउन सकिन्छ समृद्ध
तलुवा, ठूलाछाप र ज्यामिरेमा खानेपानीको ठूलो समस्या छ । मुहान छैनन् । भएका सुकेका छन् । यसको विकल्प बृहत आकाशे पानी संकलन केन्द्र निर्माण गरेर वर्षाद्मा जम्मा भएको पानी शुद्धिचरण गरेर वितरण गर्न सकिन्छ । सुख्खाग्रस्त वन तथा सार्वजनिक स्वामित्वका जग्गाहरुमा रिर्चाज पोखरीका रुपमा आहाल निर्माण गरेर बर्षाभरि पानी जम्मा गर्दा पुराना मुहानहरु जोगाउन सकिन्छ । तलुवा, ठूलाछाप र रुम्जाटारमा बृहत पम्पिङ योजना बनाएर सिंचाइ गर्दा व्यवसायिक कृषिको विकासमा योगदान गर्न सकिन्छ । सदरमुकाम र आसपासमा निर्माणाधीन सह लागनीको खानेपानी आयोजनालाई बृहत र थप व्यवस्थित गर्दै शुद्धिकरण र वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्दा घना क्षेत्रको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
कृषितर्फ सिद्धिचरण नगरलाई विभिन्न पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । रुम्जाटारलाई माटोको अम्लियपना सन्तुलन बनाएर लिची तथा सुन्ताला जोन बनाएर विकास गर्न सकिन्छ । बर्णालु, जन्तरखानी र विगुटारलाई अर्गानिक आलु जोनका रुपमा विकास गर्दै बुङको आलुको ब्राण्डिङ गर्दा विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ । ज्यामिरेलाई अकबरे जोनका रुपमा विकास गर्दा सफल हुन सकिन्छ ।
अन्य वडाहरुमा माटो परिक्षणपछि व्यवसायिक कृषिका योजना चलाउन सकिन्छ । यसले खाद्यन्न आयत कम गर्दै आत्मनिर्भरताको बाटोमा पुग्न सकिन्छ ।
यहाँ धेरै ठाउँमा स्कुस उत्पादन हुन्छ । यसको साग र जरा दुवै तरकारीको लागि अब्बल र सबैतिर रुचाइएको छ । बाँझाबारी, पाखा तथा चिस्यान र माटो भएका सामुदायिक वनहरुमा स्कूस रोपेर साग, दान तथा जरा निकासी गर्न सकिन्छ । जरा तथा दाना सुकाएर पिठा बनाएर ढिडो तथा दालका रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । सिद्धिचरणका सामुदायिक वन तथा बाँझा बारीमा स्कूस रोप्ने अभियान नै चलाएमा विस्कुट ल्याउने ट्रकमा स्कुस निर्यात गर्न सकिन्छ ।
बजार क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनका लागि सफा राखेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक तान्ने कला संस्कृतिको संग्राहलय बनाउन सकिन्छ । स्रष्टापार्कलाई थप व्यवस्थित बनाउने, थामडाँडामा विशाल चैत्य निर्माण गर्न सके धार्मिकस्थलका रुपमा विकास गर्दा बौद्धमार्गीहरुको धाम बनाउन संभव छ । लगलगेमा थप संरचना विकास गरेर सल्लेरी ज्यामिरे, जन्तरखानी र रुम्जाटारमा होमस्टे भिलेज बनाउन सकिन्छ ।
सबै वडाहरुमा सडक सुविधा तथा नगर रिङरोडको विकास गरेर यातायातको व्यवस्थित विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सडक गुरु योजना निर्माण गरेर जथाभावि डोजर लगाउन बन्द गर्नुपर्दछ ।
दुधकोशी किनारदेखी हिमपात क्षेत्र नगरपालिकाभित्रै पर्छ । यहाँ हलेसीलाई पत्ताले जोड्न बाह्रचाँदे तलुवाबाट निसंखे रुम्जाटार चायाथान केवलकारको दिर्घकालीन योजना अघि सारेर हलेसी आएका धार्मिक पर्यटकलाई रुम्जाटारको गुम्वाहुँदै सगरमाथा दर्शन गराएर पठाउन सकिन्छ । बेशक्याम्प जाने पर्यटकहरुलाई काठमाण्डौ–ओखलढुंगाको सडकमार्गबाट ल्याएर रुम्जाटार हुँदै नाम्चेसम्म हेलिकोप्टरबाट पठाउन सकिन्छ । यहाँ फ्यूल सेन्टरको पनि संभावना छ ।
श्रष्टापार्क आएका व्यक्तिलाई थामहाँडा घुमेपछि धनेपु हुँदै सेप्ली झर्ना देखाएर जन्तरखानीका गुफा घुमाएर होमस्टेमा राख्न सकिन्छ । यसले आन्तरिक पर्यटनको विकास हुन्छ । विदेशीहरुलाई आकर्षित गर्न पर्यटकीय पदमार्गका रुपमा चायाथानमा जोडेमा थप प्रभावकारी हुनसक्छ ।
नगर क्षेत्रका शैक्षिक संस्थालाई प्रविधीमैत्री बनाउँदै व्यवसायिक र प्राविधक शिक्षालाई विस्तार गर्न जरुरी छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्मको क्याम्पसलाई आंगिक बनाइ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा ओखलढुंगा क्याम्पसलाई विकास गर्न सकिन्छ । निशुल्क र गुणस्तरीय माध्यमिक शिक्षा शुनिश्चित गर्न नयाँ शैक्षिक नीति ल्याएर कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । छात्रा तथा फरक क्षमता भएका व्यक्ति अनुकुलका शिक्षण संस्था बनाउनुपर्छ ।
रुम्जाटार अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरणसहित सबैखाले रोगको उपचार हुने अस्पतालका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । निशुल्क औषधी समयमै खरिद तथा वितरण, स्वास्थ्योपचारका गर्न नसक्ने नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य विमा, कृषकहरुका लागि बाली तथा पशु विमा अनिर्वाय गर्ने नीति कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । असारे विकास रोकिनुपर्छ । गुणस्तरीय र समयमै विकासका काम हुनुपर्छ । यी कामका लागि गुरु योजना बनेर लागू हुन् । नगरपालिकाबाट पाउने सेवा पारदर्शी र गुणस्तरीय होस् । आर्थिक अनियमितता शुन्य बनाउन सबै लागौं । सेवाग्राही सेवा लिएर फर्किदा सेवाप्रदायकलाई धन्यवाद दिएर फर्किने वातावरण बनोस्, अनि हामीले भन्ने गरेको समृद्ध सिद्धिचरण वास्तवमै समृद्ध बन्छ, होइन र ?